Otu esi asacha sneakers na aka na igwe igwe
Ụlọ Ịdị ọcha
Otu esi asa akwa sneakers bụ iwu dị mkpa maka ihichapụ nchekwa
Akpụkpọ ụkwụ egwuregwu ndị a na- eme site na ndị na-ahụ anya dị mma na ndị a na-asọpụrụ, ma na-achọ nchịkwa siri ike, n'ihi na ọ dị mfe nrụrụ n'okpuru nduzi nke mmiri na unyi. N'ịchọta otú ị ga-esi asacha sneakers, ị nwere ike ime ka akpụkpọ ụkwụ gị kachasị amasị gị ogologo oge.
Kedu otu esi asa akwa sneakers?
N'ihe banyere ejiji kwa ụbọchị, ilekọta snịịka na-enweghị ike ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ị na-ehichapụchaa ya. Maka nke a, ị nwere ike iji ma ngwaahịa ọkachamara (sprays, shampoos, paints, brushes), ma nwalee ọgwụgwọ ụlọ (nchara ncha, eraser, kọfị kọfị). Ọchịchị bụ isi - nchịkọta niile iji wepu unyi na stains nwere ike ịmalite naanị mgbe akpụkpọ ụkwụ ahụchara kpamkpam. Mgbalị ọ bụla iji dochie mmiri mgbochi mmiri ga-eme ka ọ ghara ikpochapu ikpo ya na ọdịdị nke ọhụụ na-adịghị mma.
Ọ nwere ike ịsacha sneakers na-ede akwụkwọ na typewriter?
Na oge enweghi oge, onye ọ bụla achọghị ka ọgba aghara na nhicha ụlọ ọrụ nke ọbụna ndị sneakers kachasị mmasị. Ya mere, ajụjụ ajuju - enwere m ike ịsacha sneakers na-eji ígwè edemede ederede? Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ngwaahịa ndị dị elu dị elu, ha agaghị emerụ ahụ ịsa ahụ n'ime igwe nke igwe. Ma n'ihi na ndị mmadụ na-ahụkarị, mmekọrịta chiri anya na mmiri na detergents nwere ike ịghọ ọnwu. Ya mere, ọ ga-ekwe omume itinye ihe ize ndụ a nanị ma ọ bụrụ na mberede ma na-edebe nchebe niile.
Kedu otu esi asa akwa sneakers na igwe ime?
Ka anyị leba anya n'ụzọ zuru ezu ka esi asacha sneakers kwesịrị ekwesị:
Ọrụ ịkwadebe . Tupu ị eziga ndị sneakers n'ọdụ ụgbọ ahụ, ha ga-ehichapụsị ájá nke na-agbanye na nke. Jiri nlezianya nyochaa mmebi nke mpụga (ntụgharị di iche iche, obere oghere, wdg). Ọ bụrụ na ha nwere igwe na-asacha mma ịkagbu. A ghaghị iwepụ laces na zippers na Velcro.
Nhọrọ nke ntụ ntụ . Na-asacha sneakers ndị na-edozi ahụ, enwere ike iji ya dị ka mkpụrụ gels ma ọ bụ capsules. Ha enweghi ihe ndi siri ike nke nwere ike ichikota ndi ozo.
Nhọrọ nhọrọ . N'ọtụtụ ọrụ nke oge a, ndị na-emepụta nwere usoro pụrụ iche maka ịsa akpụkpọ ụkwụ egwuregwu. Ọ bụrụ na ọ naghị asacha sneakers na-edozi ahụ n'ọnọdụ dị mma. Maka ịsacha ọ dị mkpa iji akpa pụrụ iche, n'ime bat ahụ ekwesịghị ịbụ karịa akpụkpọ ụkwụ abụọ.
Icha. A ghaghị iji nlezianya gbasasịa ndị na-eji ụgbọelu buru ibu ma jupụta akwụkwọ dị ọcha iji kpochapụ mmiri mmiri. Ghicha ha mma na ikuku ohuru, site na ebe ikpo ọkụ na ìhè anyanwụ kpọmkwem.
Kedu esi asa aka sneakers?
Ntinye akwụkwọ nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ bụ:
Ịkwadebe ihe ngwọta. Ị nwere ike iji dịka ngwá ọrụ pụrụ iche maka edozi, na gel ọ bụla maka ịsa ákwà ma ọ bụ nchacha ncha.
Nwepụta akpụkpọ ụkwụ. Anyị na-eme ka akwa akwa akwa (ọkacha mma na-acha ọcha) na ngwọta, gbanye ya ma kpochie akpụkpọ ụkwụ ahụ nke ọma. Anyị na-eme nke a nke ọma, na-agbalị ka anyị ghara imebi ikpo.
Richaa. Mgbe emechara sneakers, ha ga-asacha ya na ncha. Enweghị ihe ọ bụla a ga-eme n'okpuru mgbata ma ọ bụ na mmiri mmiri, dịka mmiri mmiri na-erubiga ókè nwere ike iduga na mmebi nke suede. Iji saa ncha ọ dị mkpa yana ịsacha sneakers na-edozi - akwa akwa akwa akwa na mmiri ọkụ na mgbakwunye na ọtụtụ tụlee nke mmanya.
Icha. Mgbe ha mechara usoro mmiri ahụ, a na-ehichapụ ndị sneakers na ákwà akọrọ ma hapụ ya ruo mgbe ọ ga-akọrọ.
Kedu ka esi ehicha ndị sneakers?
Site na mmetọ mmetọ ọ bụ nnọọ ihe ga-ekwe omume iji jikwaa emezi ihe. Nhọrọ ndị a ga - ahọrọ karịa ịchacha sneakers:
Mmiri araba abụba (1 iko) + soda (1 tiji ngaji). Wet akwa dị ọcha na mmiri soda-mmiri ara ehi na ehichapụ ájá.
Talc, starch ma ọ bụ nzu ga-enyere aka wepu abụba ahụ. Wụnye stains na onye ọ bụla n'ime ha, hapụ obere oge, wee jiri nlezianya kpochapụ ya na mgbatị siri ike. Maka sneakers brown ma ọ bụ beige, ị nwekwara ike iji kọfị.
Mmiri Ammonia + starch. Kashitsa nke ihe ndị a ga-ewepụ ihe na-egbuke egbuke ma mee ka ọ dị ọhụrụ. A ghaghị itinye ya na ndị sneakers wee hapụ aka, ma kpochapụ ihe fọdụrụ nke ahịhịa ahụ.
Kedu ihe ị ga-eme - ndị sneakers shuzzled?
Ka oge na-aga, akpụkpọ ụkwụ ọ bụla nwere ihe onwunwe dị ka ọkụ - ọ na-egosi na ọ na-acha ọcha ma na-egbu maramara. Kedu ka esi weghachite sneakers? Ụzọ kachasị mfe bụ iji ụzọ maka agba agba, nke a pụrụ ịzụta na ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ ọ bụla. A na-ekpocha sneakers na ahịhịa pụrụ iche. Jiri akpụkpọ ụkwụ mee ihe site na nseta 25-30 cm, wee zigazie gị ka ọ kpọọ nkụ n'ime ebe dị mma maka awa 10-12.
Kedu ka akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ?
Kedu esi gbanye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ?
Kedu esi ewepụ stains site na dandelion?
Kedu esi ewepu isi si akpụkpọ ụkwụ?
Esi tufuo mpi?
Kedu ka esi asa akwa akpa na igwe igwe?
Kedu esi ewepụta Mercury si kapeeti?
Olee otua esi tufuo iri abuo n'ulo ugbo?
Kedu otu esi ehicha akwa akwa ahụ n'ụlọ?
Ịlụ moth ọgụ n'ụlọ
Karịa ịsacha ọkụ nke abụba nsure ọkụ ochie?
Kedu ka esi etinye ihe n'usoro dị n'ime ụlọ?
Otu esi asacha sneakers n'ụlọ - ndụmọdụ dị mfe maka nlekọta akpụkpọ ụkwụ
Kedu esi gbanye sneakers?
Kedu otu esi ahọrọ akwụkwọ ahụaja na nnukwu ọnụ ụlọ?
HCG mgbe IVF
Achịcha anụcha - 44 foto nke ihe oriri kachasị mma n'oge niile
10 nke ulo kachasị ike nke siri ike iche n'echiche
Ụjọ nke oghere - phobia ma ọ bụ ọrịa na otu esi ewepụ ya?
Uwe mmiri mara mma - ihe kachasị mma na ụdị iche iche
Ndị na-ekpochapụ cherry na ọgụ megide ha
Ezigbo mmanụ aṅụ - ọma na ihe ọjọọ
Chrysalidocarpus areca - nlekọta ụlọ
Lady Gaga kwuru banyere ya na Taylor Kinney
Akpụkpọ ụkwụ maka ịcha akwa - ọnụ ọgụgụ dị mma na ụdị dị iche iche na agba nke ogologo ọkpa
Adenocarcinoma nke ara
Jamie Lee Curtis n'oge ọ bụ nwata
Kedu ka ngwa ngwa na-adaba mgbe ị mụsịrị nwa, ọ bụrụ na ị na-eri nri?
Uwe na nipples
Nnu glauber maka nha
Kedu ka esi mụta ighikota mkpị gburugburu gburugburu?
Ụlọ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ maka ụlọ
Achịcha na mmiri ara ehi - ememe
Esi ewepu ntu na ulo?
Trichomoniasis - mgbaàmà
Melanie Griffith n'ihu na mgbe plastik